Kungani Amajele Esusa Ukuhambela Ngezingcingo Zevidiyo? -Izindaba-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Kungani Amajele Aphindisela Ukuvakasha Ngezingcingo Zevidiyo?
Isikhathi: 2020-08-12 Hits: 15
Eminyakeni yamuva nje, amajele amaningi ngokwengeziwe angenise izinsizakalo zokubiza ngamavidiyo.
Ngokwethiyori, le mikhiqizo ingenza kube lula ukuthi iziboshwa zilondoloze ubudlelwano bazo nomndeni nabangane abangaphandle.
Ucwaningo lukhombisa kaninginingi ukuthi iziboshwa ezixhumene njalo nezwe langaphandle kungenzeka ukuthi ziyeke ukuziphatha okungadala ukuthi zibeke engcupheni ukukhululwa kusenesikhathi.Ngokusho kweFederal Bureau of Prisons, iziboshwa ezigcina ubudlelwane obuqinile nabangane nemindeni zinciphisa kakhulu amathuba okuthi ukubuyisela kabusha. Futhi, abangane nabomndeni abaningi abahlali eduzane nezinsiza, ngakho-ke ukuvakashelwa kusayithi kungabiza, kube nzima futhi kungathandeki. Ngokuvakashelwa okukude kwevidiyo, abangani nomndeni bangathintana ngokwengeziwe nabantu ngokunethezeka emakhaya abo. Ukuvakashelwa ubuso nobuso kudinga ukunakekelwa okwengeziwe kwabasebenzi — ukuphelezela iziboshwa ukuya nokubuya emakamelweni okuvakasha kanye nokuqinisekisa ukuthi akukho mngcele oguqula izandla ngesikhathi sokuvakasha. Ngakho-ke ukushintshela ekuvakasheleni ividiyo kungonga imali ejele eboshwe ngokheshi.
Kepha amajele nawo azuza ngqo ngokuthe ngqo ekunciphiseni ukuvakashelwa ngaphakathi kwabantu. Ngenkathi ukuvakashelwa kwamavidiyo esizeni kuvame ukuba mahhala, izinkampani ezihlinzeka ngohlelo ngokuvamile zinikela ngenkonzo yokubiza ividiyo ebizelwa ngaphandle, ekhokhelwayo. Futhi amajele athola iphesenti elinzima laleyo mali.
Njengomhlinzeki oholayo wezinsiza zocingo eziphephile nezimboni kufaka phakathi ifoni, ingulube switch, futhi ikhiphedi. Izingxenye zocingo zeXianglong zithunyelwe ezikhungweni ezingaphezu kwe-300 emhlabeni wonke. Ukuze uthole okwengeziwe ngathi, wamukelekile uthintane!
Okwedlule: Izinkinobho eziyi-16 Zekhiphedi Engagqwali ezifakiwe Kwiprojekthi yeParcel yeKhabhinethi
Okulandelayo: Ikhiphedi ye-Metal yekhiphedi ye-seft eyenziwe nge-selocated Alter Digital Access